Ekot oo kashiftay xiriir ka dhaaxeeyey Akilov iyo mintidiin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ekot oo kashiftay xiriir ka dhaaxeeyey Akilov iyo mintidiin
La daabacay fredag 12 maj kl 11.04
"Waa raad xiiso leh oo ay tahay in la baaro"
Rakhmat Akilov xiriir ayuu kula lahaa aaladaha bulshada shabakad mintidiinta islaami ah.
U kuurgal ay laanta Ekot ku sameysay raadka alaadaha bulshada ee Rakhmat Akilov oo lagu tuhn-san yahay in uu ka dembeeyey falkii argagaxiso ee gaari xamuul ah oo dad badan lagu jiirsiiyey bartamaha Stockholm mudo hadda laga laga joogo bil iyo xoogaa, ayey ekot ku ogatay in uu Rahkmat Akilov xiriir la lahaa shabakad jihaadiyiin ah oo uu horumood u yahay hoggaamiye ka tirsan jihaadiyiinta islaamiga ah. kaas oo loo doondoonayo falal argaagxiso. Akilov ayaa kala socon jiray oo ka heli jiray borobaganda ay hoggamiyaan alado bulsho jihaadi ah oo laga isticmaalo dalka Ruushka.
Magnus Ranstorp oo ah cilmibaare ku xeeldheer argagaxisada ayaa u arka xogta ekot soo bandhigtay mid xamaasad badan leh.
– Waa raad xiisahiisa leh balse su’aashu waxay tahay in heyaddaha dowliga arrintan arkeen iyo in kale, ayuu yiri.
Laanta Ekot ayaa dabogal ku samaysay raadka Akilov ee aaladaha bulshada, waxuuna raadkiisa marka la sii raacay galay hoggaamiye xagjir ah oo jihaadi ah.
Aaladaha la raadraacay waxaa ka mid ah aalad laga isticmaalo Ruushka oo la yiraahdo Odnoklassniki . Aaladahan ayaa waxaa ka buuxa kontooyin ay leeyahiin jihaadiyiin asalkoodu ka soojeedo Uzbekistan, kuwaas oo maalmo ka hor weerarkii Stockholm ku baahiyey borobagandada islaamiyiinta. Borobagandadan waxaa isku aruuriyo ruux magaciisa qarsaday oo Rakhmat Akilov ku darsaday saxiibadiisa, sidaas ayuna Akilov ku heli jiray borobagandada shabakada. Borobagandadu waxay u badan tahay wacdi iyo sababta loogu baahan yahay dagaal jihaad, sawiro dhiig leh kadib weerar qarax iyo weliba linkiyo qofka u godbinaya bog jimicsi oo ay leeyahiin jihadiyiin Uzbek ah. Sidoo kale waxaa ku jiro video-yo laga baranayay sida loo isticmaala qoryaha iyo hub kala-duwan.
Borobagandada shabakadan baahiso ee ay Ekot ukuurgashay ayaa mar kasta salka la gashaa shaqsi iskugu waca Abu Saloh. Abu Saloh waa hoggaamiyaha ugu sareeya koox uzbek ah oo ka dagaalanta Suuriya, xiriirna la leh Al-Qaida.
– Inkir la’aan waa arrin xiiso leh maadaama ay mujineyso xiriirka ka dhaxeyn kara, waana in la baaro. Waxayna dhanka kale muujineysaa kaalinta aaladaha bulshada, ayuu yiri Magnus Randstorp.
Abu Saloh ayaa ah nin ay ku raadjoogto oo baadi goobeyaan boliiska caalamiga ah ee Interpol. Waxuuna ku eedeysan yaahy argagaxisnimo iyo maalgelin argagaxiso.
Waxaa lagu tuhmayaa in uu suurogaliyey weerar ismadiidin ah oo sannadkii hore ka dhacay dalka Kirgizistan. Sidoo kale waxaa jira tuhuno falal argagaxiso oo cusub oo ninkan lagu tuhmayo.
Maalmo ka hor weerarkii Stockholm ruux ayaa weerar ismadiidin ah ku qaaday tareenka dhulka hoostiisa mara magaalada Sankt Petersburg dalka Ruushka.
Sida laga soo xigtay wargeysyada Ruushaka Gazeta.ru oo xiriir la sameysay boliska iyo heyaddaha amniga ee Ruushka, waxaa la tuhumayaa in maskaxda weerarka Sankt Petersburg ay tahay Abu Saloh.
Balse ma ahan xog ay Ekot xaqiijin karto. Laakiin ekot waxay xaqiijin kartaa in shabakadda xagjirka ah ee aaldaha bulshada uu Akilov xiriir kula lahaa ay xiriir toos ah la leedahay hoggaamiyaha jihaadiga ah Abu Saloh ee loo doon doonayo falal argagiso ee lagu tuhmayo.
Akilov oo aan maskaxda ka bukin markii uu falka argagaxiso galayay
onsdag 10 maj kl 11.50
Asxaabta Akilov :"Aqoon u ma aanu laheeyn diinta islaamka"
onsdag 12 april kl 11.13
Eedeeysane Akilov oo maxkamad ku xukuntay in ruumaanka lagu hayo
tisdag 11 april kl 11.35